Kuhlukene imibono ngenyuvesi efuna kufundwe ngesiNgisi | News24
Kuhlukene imibono ngenyuvesi efuna kufundwe ngesiNgisi
Akusibona bonke ababone okuhle ngokubuyekezwa kwenqubomgomo yezilimi okwenze isiNgisi kwaba ulimi lokufundisa eNyuvesi yaseStellenbosch.
Le nyuvesi ibifundisi ngolimi lwesiBhunu iminyaka eminingi, kodwa kugcwala kwabafundi abansundu kule nyuvesi konyaka odlule kugudlule ulimi lwesiBhunu.
OLUNYE UDABA:Inyuvesi isizobaqasha ngokugcwele abasebenzi
Umkhandlu wale nyuvesi usunqume ukubuyekeza inqubomgomo yezilimi yale nyuvesi lapho kwenziwe izinguquko kulaba abasanothando lokufunda ngesiBhunu kodwa kwavulwa ithuba nakulabo abanothando lokufunda ngesiNgisi.
UThisha omkhulu kule nyuvesi uPhrofesa Wim De Villiers uthe:''Sifuna ukugxika kuzo zonke izinhlaka zokufund ngakhoke lokhu akugcini kuphela emakilasini ngoba kuthinta izifundo ezengeziwe, izingqungquthela ezibanjwayo kule nyuvesi kanye nezokuxhumana ngobuchwepheshe bamakhompyutha.
Yize kunjalo oyiStellenbosch SRC James De Villiers usamukele lesi sinqumo somkhandlu ngokuthi sibafaka emzileni ofanelekile.
Abanye abantu abafana noProfesa Herman Giolimeeowayeyilunga lo mkhandlu wale nyuvsi uthe uphoxekile ngalokhu ngoba kwehlisa usiko lwesiBhunu nokuyinto ebingumgogodla wale nyuvesi, kubika iSABC.